Cdma အသုံးပြုနည်းလေးများအား သင်ပေးကြပါရန&#4153 — MYSTERY ZILLION
Cdma အသုံးပြုနည်းလေးများအား သင်ပေးကြပါရန&#4153
April 2010 edited May 2010 in Other
CDMA အသုံးပြုနည်းလေးများအား သင်ပေးကြပါရန်
(၁)ကျွန်တော်အသိတစ်ယောက်ဆီမှာ 71xxxx နဲ့စတဲ့ CDMA ဖုံးကဒ်ပြုလုပ်ထားပြီး ဖုန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ Hand Set သွား၀ယ်ပြီး ကဒ်ထည့်သုံး
ကြည့်တော့ အသုံးပြုလို့မရတာနဲ့ ဆိုင်ပြန်ပြတော့ ဖုန်းဆိုင်က Hand Set မှာ နံပါတ်တချို့ ရိုက်ထည့် လိုက်တာအသုံးပြုလို့ရသွားပါတယ်။
++++++အဲ့ဒီ နည်းပညာကို သင်ကြားလိုပါတယ် တတ်သိကျွမ်းကျင်သူများမှ သင်ပြပေးပါရန်
(၂)နောက်အသိတစ်ယောက်ဆီမှာ 0990xxxxx နဲ့စတဲ့ Cellular ဖုံးကိုင်ဆောင်ထားပြီး ဖုန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ Hand Set သွား၀ယ်ပြီး Code ထည့်
သုံးရပါတယ်။ အဲ့ဒီ Code ထည့်နည်းကိုသိလိုပါတယ်။
CDMA 800 ကတ်နှစ်ခုရှိပါတယ် Sim Card နဲ့Top-up card (ပိုက်ဆံကတ်ခေါ်မှာပေါ့ဗျာ)
ပိုက်ဆံကတ်မရှိပဲ ဖုန်းပြောလို ့မရသလို Sim card လည်းမရှိ်လို ့မရပါဘူး နှစ်ခုလုံးရှီရပါမယ်
နိုင်ငံခြားကိုဆက်ချင်ရင်တော့ FEC card ပါထပ်ထည့်ရပါမည် code ထည့်နည်းကို card ပေါ်မှာ
အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ် ဖတ်ကြည့်ပြီး စမ်းနိုင်ပါတယ်
အဲဒီ့သင်တန်း ဖွင့်မယ်လူမရှိသေးဘူးလား မဖွင့်သေးရင် ဖွင့်သင့်တယ်ထင်တယ် :d
ဗမာပြည်က ကဒ်တော့မသိဘူး တစ်ခြားနိုင်ငံကကဒ်တွေကတော့ ဘယ်နံပါတ်ကိုခေါ်ပါ ကဒ်ပေါ်ကနံပါတ်ကိုနှိပ်ပါ ပြီးရင်ဘယ်ကီးကို နှိပ်ပါလို့ ကဒ်တွေမှာပါပါတယ် ဗမာပြည်မှာတော့ ဗမာလိုရေးထားမှာပါဗျ။ :d
(၁) 71xxxx က အရင်တုံးကပေါ်ခဲ့တဲ့ Radio Phone ပါ။သူ့ရဲ့ Code ကို Sim Card ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။
450 MHz ဖုန်းမှာထည့်သုံးတာပါ။ဖုန်းက Sim Card ကို မသိလို့ ဆိုင်က Code ရိုက်ထည့်ပေးတာကို
(၂) Cellular ကတော့ အရင်ဖုန်းအဟောင်းက Code ကိုပြန်ယူပြီးတော့ အသစ်၀ယ်တဲ့ဖုန်းမှာ
ကိုလူပျိုကြီး ပြောသလို သင်တန်းမရှိဘူးလားဗျာ..
Phone နဲ့ပက်သက်တဲ့ Hardware၊Software ပိုင်းသင်ယူချင်ပါတယ်ဗျာ။ နယ်မှာ လုပ်စားချင်လို့ ဟီး
ကျွန်တော်တို့ နယ်ဘက်တွေမှာ Phone တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆို ရန်ကုန်အထိ လာရတယ်ဗျာ။ လမ်းစရိတ်ရယ် ဒီရောက်တော့ နားမလည် ပါးရိုက်လွှတ်တာရယ် နဲ့မစားသာဘူး ၊ သင်တန်းရှိတယ် ကြားရင်လဲ လက်တို့ပါအုံးဗျာ။
ခုလောလောဆယ် ဖုန်းဆိုင်မှာ လုပ်နေတဲ့ Technical တွေကရော ဘယ်ကသင်ယူတတ်မြောက်ကြတယ်ဆိုတာ Share ပေးပါစေချင်ပါတယ်ဗျာ
April 2010 edited April 2010 Registered Users, Banned Users
အဲဒီ အက်ဖ်အီးစီ ဆိုတာကြီးက ဘီလိုလဲဟင်. ပြည်ပကနေ ပြည်တွင်းကိုခေါ်ရင်ရော ဝါးတာပဲလား.. ဟို သင်တန်းဆိုတာတော့ သင်ရတဲ့လူကတော့ ဟီး .. သင်ပုန်းကြီး ပြန်သင်ပေးရသလိုနဲ့ တူနေမယ်ထင်တယ်.
ဒါတော့လည်း ဟုတ်သားလား.. ရန်ကုန်လာရတဲ့ အလုပ်က မလွယ်ပေသား။ ဖုန်းဆိုင်မှာလုပ်နေကြတဲ့သူတွေကတော့ ဂူဂလင်းကြတယ် ထင်တာပဲ။။ းစ ရှုပ်နေတာပဲ ဖုန်းတွေကလည်း ၊ တစ်မျိုးတည်းသုံးကြပါလား၊ ရှင်းတာကို ရှုပ်အောင်လုပ်ကြတယ်။ ခုလည်း ထွက်ပြန်ပြီ ၄၅၀ တွေရော ၅၆၀ တွေရော။ ဟိုသယ်မရ ဒီသယ်မရကလည်း ရှိသေး.. နားကို လည်နိုင်ဘူး.. တစ်ခါ မီးပလပ်တွေရှိသေးတယ် .. ၂ ပင် တွေရော သုံးပင်တွေရော ပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်.. မီးပလပ်ပေါင်းစုံရှိတယ်. နားကိုလည်နိုင်ဘူး ..ဘယ်တော့လည်မလည်းလဲ ပြောတတ်ဘူး။ :rolleyes: တစ်ခါ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့အိမ်က အိမ်ဖုန်းကြီးကို ၊ အင်တာနာတိုင် အုန်းပင်ပေါ်တက်ထောင်၊ အဲပေါ်ကနေ လေထဲလွှင့် ၊ တကသိုလ် သွားရင် သယ်သွား၊ ဂိုက်အပြည့်နဲ့ နားထောင်၊ သူ့အမကလည်း ဒီလိုင်းကိုပဲ ဆိုင်ကနေ သုံးပြန်တယ်။ သူကိုင်ရင် အမကလည်း နားထောင်လို့ရသပါ့။ တစ်ခါတစ်ခါ သူများလိုင်းတွေလည်း ပူးလာတတ်တယ်ဆိုပဲ၊ ပုလိပ်လိုင်းဆိုလား ဘာလား ။ ရယ်ရတာလေး ပြောပြတာပါ။
yinhtay123 wrote: »
ဆယ်လူလာ ESN ထဲ့နည်းက
*#544797+++++++++ blah blah balh ဆက်မပြောပြတော့ဘူူး။အဲဒါဥပဒေနဲ့မလွတ်ဘူး:eek:
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပိုက်ဆံရတဲ့နည်းမို့ သိချင်ရုံသက်သက်ပါ။
ရှုပ်နေတာပဲ ဖုန်းတွေကလည်း ၊ တစ်မျိုးတည်းသုံးကြပါလား၊ ရှင်းတာကို ရှုပ်အောင်လုပ်ကြတယ်။ ခုလည်း ထွက်ပြန်ပြီ ၄၅၀ တွေရော ၅၆၀ တွေရော။ ဟိုသယ်မရ ဒီသယ်မရကလည်း ရှိသေး.. နားကို လည်နိုင်ဘူး.. တစ်ခါ မီးပလပ်တွေရှိသေးတယ် .. ၂ ပင် တွေရော သုံးပင်တွေရော ပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်.. မီးပလပ်ပေါင်းစုံရှိတယ်. နားကိုလည်နိုင်ဘူး ..ဘယ်တော့လည်မလည်းလဲ ပြောတတ်ဘူး။
ဟုတ်တယ်ဗျို့...နားကိုမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာ။ မျက်စေ့တော့လည်တယ်။ မီးပလပ်တွေဆိုရင် သိသလောက်တော့ ဥရောပကတစ်မျိုး၊ အမေရိကကတစ်မျိုး၊ အာရှကတစ်မျိုးနဲ့ စနစ်အမျိုးမျိုးရှိရာမှာ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အဲဒီစနစ်ပေါင်းစုံရောနေတာလို့ထင်ပါတယ်။ သူများထက်ထူးကဲသာလွန်တာပေါ့ဗျာ။
တစ်ခါ တယ်လီဖုန်းဆိုရင်လည်း ဆယ်လူလာတဲ့၊ ဂျီအက်စ်အမ်တဲ့၊ စီဒီအမ်အေတဲ့၊ ဒဗလျူစီဒီအမ်အေတဲ့၊ ကြိုးမဲ့အော်တိုဖုန်းတဲ့။ စီဒီအမ်အေဆိုရင်လည်း ၄၅၀ တဲ့၊ ၈၀၀ တဲ့၊ ပြီးရင် ၁၂၀၀ လာအုံးမလားမသိဘူး။ နောက်ထပ် ထပ်ပြီးရှိပြန်တာက စီဒီအမ်အေဆိုရင်လည်း မြို့နယ်တွင်းသုံးတဲ့၊ တစ်နိုင်ငံလုံးသုံးတဲ့။ အမျိုးမျိုးနဲ့ မရိုးနိုင်အောင်ပါပဲ။ ပိုက်ဆံရှိလို့သာ အမျိုးစုံအောင်၀ယ်သုံးမယ်ဆိုရင် တောင်းကြီးနဲ့အပြည့်သယ်ရလိမ့်မယ်...ဟူး။